Tsy manoro hevitra fotsiny ny firaisana ara-nofo, fa manoro hevitra mihitsy aza ny mpivady mba hitondra zavatra vaovao amin'ny fiainany akaiky. Ny "dipoavatra" toy izany dia ny firaisana ara-nofo tsy misy penetrany, izay ankoatra izany, dia mety hampiharina amin'ireo izay tsy miezaka ny hanao veloma amin'ny fahadiovam-pitondrantenany.
Inona no anaran'ny firaisana tsy misy fampidirana?
Ireo Shy olona dia afaka mampiasa amim-pahasahiana toy ny hoe "parasex" toy izany. Etsy ankilany, ny firaisana ara-nofo toy izany dia tsy misy fiatrehana ho an'ny mpiara-miasa iray dia safidy tsara ho an'ireo tranga ireo rehefa tsy azo atao izany, aleo lazaina, ny fiaraha-miasa tanteraka.
Karazana firaisana ara-nofo tsy misy penetrany
Oral sex . Ny blowjob sy cunnilingus dia tsy mitondra afa-tsy karazan-java- maniry eo amin'ny fiainana an-dalam-pon'ny mpitia, fa heverina ho safidy tsara ihany koa ho an'ny fialan-tsasatra mety tsara, izay manampy amin'ny fientanentanana kokoa. Ny zavatra tena mahaliana indrindra dia ny fantsom-peo dia misy fiantraikany tsara eo amin'ny toeran'ny vehivavy iray. Noho izany, mandritra ny fientanam-pandrenesana, ny taovan'ny lahy sy vavy dia mamoaka ny oxytocine hormonina. Misaotra azy fa mifankatia mafy ireo mpifankatia be fitiavana. Ankoatr'izany dia manampy amin'ny ho avy mba hizotra mora foana ny toe-javatra mampihetsi-po. Ary, raha mandady lalindalina kokoa ianao, dia hita fa ity karazana firaisana ara-nofo tsy misy fandraisana anjara ity dia manampy amin'ny fampivoarana ny fitondrana vohoka. Mandritra ny pelaka dia manaisotra ny ADN ny sipany, izay midika fa ny vatany dia tsy hahatsikaritra ny tsirin-tsain'ny tanora iray ho zavatra hafa. Izany dia midika fa ny mety hitera-jaza sy ny tsy fahampiana dia mitovy amin'ny zero.
Firaisana ara-nofo . Tsy mitovy amin'ny karazana taloha io fiaramanidina io. Noho izany, amin'ity tranga iray ity, ny penis dia tafiditra eo anelanelan'ny kavia vavy, miaraka amin'ny mpiara-miombona fihodinana.
Ny firaisana ara-nofo ao Trihofilichesky . Tsy dia mendri-piderana loatra ary tsy dia mahazatra loatra ny fibodoana ny fitiavana, izay manosihosena ny lehilahy manana ny maha-izy azy ambony indrindra amin'ny volo vavy. Zava-dehibe ny manamarika fa, arakaraka ny karazana volon'ny ankizivavy, ny halavany, ny mpiara-miasa dia hanana fahatsapana hafa. Indrindra indrindra fa ity karazana firaisana ara-nofo tsy misy penetrany ity dia mety ho an'ny vehivavy izay mankafy zavatra mahafinaritra rehefa misy olona mikasika ny volony.
Petting . Tsy inona izany fa ny fakana tahaka ny firaisana. Afaka mandray anjara amin'ny fitafiana izy ireo. Marina fa mahasalama kokoa ilay izy, ary mahafinaritra kokoa ny manohina azy, ary tsara kokoa ho an'ny voromailala. Eto ny tena zava-dehibe dia ny mifantoka amin'ny fanentanana ny faritra erogenous amin'ny tsirairay amin'ny fanampian'ny fiteny. Ankoatra izany, afaka manamarika ny tendron'ny mpiara-belona aminao miaraka amin'ny volom-borona ianao. Ny tena mahaliana indrindra dia ny toko manontolo ao amin'ny Kamasutra dia natokana ho an'ny famaritana ity dingana ity. Raha miresaka momba ny fihantsiana lalina isika, dia samy mitanjaka avokoa ny mpiara-miasa, mifampiarahaba amin'ny fanampiana ny lela, ny vata-mangatsiaka. Ankoatr'izay dia afaka manolo-tena amin'ny filahianao ianao , ny felatio sy ny cunnilingus.
Ny firaisana ara-nofo . Raha afaka mirehareha amin'ny haben'ny tavy ianao, dia maninona raha manandrana ity karazana fialamboly ity, izay misintona ny penis teo anelanelan'ny nono ary manosihosy azy ireo? Ny toerana tsara indrindra ho an'io tranga io - mandohalika eo anoloan'ny mpiara-miasa izy.
Gluteal petting . Ao ambadiky ny anarana mahatsiravina dia miteraka ny voka-dratsin'ny lahy eo amin'ny lahy eo amin'ny lahy, na ny fifandraisana eo aminy. Tsy misy na inona na inona atao amin'ny fampidirana anal. Ny hany zavatra tokony hikarakarana mialoha, dia ny fisian'ny tavoahangy misy tasy.
Fiaraha-miasa amin'ny Virtual . Ny fifandraisana tsy misy fitsanganana lavitra dia tsy vitan'ny hoe manatona akaiky kokoa ny mpifankatia, fa koa ny fahafahana manova ny fifandraisana amin'ny fomba manokana. Ny firaisana ara-nofo amin'ny finday, amin'ny Skype na fanoratana mahaliana - izay hanampy amin'ny fanasoketana ny fahasamihafana ara-piraisana eo amin'ny fiainana feno.
Firaisana mandritra ny fadimbolana
Spiral ny IUD
Ahoana no fomba hanomezana fahafinaretana ny lehilahy iray eo am-pandriana?
Fomba mahaliana momba ny firaisana
Ahoana ny fomba fitondrana lehilahy adala eo am-pandriana?
Ahoana ny fampiasana baolina vaginal?
Nahoana ianao no te hanao firaisana alohan'ny fotoana?
Fomba fiasa ara-pananahana
Braxton Hicks Breaking - Description
Nanamafy ny maha-bevohoka azy ny ray Lindsay Lohan
Ny sambofiaran'i Noa - Fahamarinana na fitaka - Facts sy fitsangantsanganana
Sarafana ho an'ny Summer Exercise 2013
Vovon-trano matevina ao anaty aterineto
Wallpapers amin'ny làlana
Ahoana no itiavana ny lariat?
Sarimihetsika fanandramana vaovao momba ny "Famonoana olona ao amin'ny Express Express" miaraka amin'ny kintan'ny mpilalao sarimihetsika: ny tranofiara voalohany
Ny sambo tsara indrindra ho an'ny kebab shish avy amin'ny kisoa
Ahoana ny fantsehana ny triceps?
Ligol ho an'ny saka